Le yi-TV enkulu futhi ebiza kakhulu emhlabeni | Izindaba zamagajethi
Le yi-TV enkulu kunazo zonke futhi ebiza kakhulu emhlabeni
Uma sikhuluma ngamathelevishini, njengalapho sikhuluma ngamanye amadivayisi amaningi, iqiniso yilokho usayizi ubalulekile. Sonke sifuna ukubona ama-movie wethu owathandayo nochungechunge esikrinini esikhudlwana kungcono, nangokucaca kwesithombe esivumela ukuthi siqonde izimpande ze-Frida Kahlo biogote edlalwa nguSalma Hayek.
Masibe qotho: ukuhlala ngokuhlangenwe nakho njengokuya ebhayisikobho, sesivele sinayo i-cinema, ngenxa yalokho okusinika umoya omncane phakathi kokuthunyelwe nokuthunyelwe. Ngakho-ke isiginesha C Imbewu isinikeza okuhlangenwe nakho okungcono kakhulu: kubizwa kanjalo C Imbewu 262 (Ngokuzimisela, akekho noyedwa oqhamuke negama elihehayo?) Futhi ngu- i-mammoth ithelevishini engamasentimitha angama-262 enesinqumo esingu-4k lokho kuzokwenza ama-retina akho aqhaqhazele ngenjabulo.
C Imbewu 262, "isilo esinsundu" sethelevishini
Kuyo yonke impilo yami, isikhathi ngasinye lapho i-TV entsha ingena endlini bekulokhu kukhulisa usayizi wayo. Kudlulile lokho kumayelana namaTV amancane anamathele egumbini lokulala, Ngisho f ... kude! Futhi ngenkathi sikhathazeka ukuze iselula ibe nemodi yasebusuku noma lawo mathoni afudumele angalimazi amehlo ethu lapho sisebumnyameni ebusuku ekamelweni sibuza ukuthi ngubani owaziyo, ngamamitha amabili nje phambi kwethu sine-trillion- idivayisi ye-intshi ukuthi isivezela ukukhanya okukhazimulayo okungekho kuwo amaconsi iso ayinkulungwane angasivumela ukuba siphunyuke. Kepha ngukuthi ibhayisikobho, noma ibonwa esikrinini esikhulu, noma ayijatshulelwa, lelo iqiniso. Ngakho-ke uma sibheka igumbi lokuphumula, akusakubizi futhi; Isisekelo, noma isifiso, sabaningi sithi: "uma kunganela ngaphakathi kwemikhawulo yezindonga, uphahla naphansi, kuyangisebenzela njenge-TV, kodwa uma kufanele udilize udonga, nakho ".
Yebo, kulabo abangasabi ukudiliza udonga ngisho nophahla lwamagumbi abo okuhlala ukuze babeke ithelevishini abayifunayo ngempela, inkampani yeC C Seed yethule lokhu Ukulala nesilwane kwe-TV kokubili ngosayizi, ikhwalithi nentengo. Hamba ubize umngani wakho ngesitini bese umbeka ukusika ngoba "umama wawo wonke amaTV" akazokuzifaka ekhaya. Kepha ungakhathazeki, uma ungenaye umngane wamasoni, bazokushiyela wena ekhaya ngama-euro angama-35.000 nje.
IC Seed 262 ngumabonakude omangalisayo ozokwazi ukujabulela ngawo uchungechunge lwethelevishini oluhamba phambili yalezi zikhathi noma khumbula u-Adam West ongasekho ochungechungeni Batman ngendlela obungakaze ucabange ngayo ngaphambili.
Asizitholi sikuthelevishini, kodwa ngaphambi ITHELEVISHININgakho-ke, ngosonhlamvukazi, insimbi yamadoda ekhuluma ngezilimi nokho eziveza njengomama wawo wonke amathelevishini emhlabeni, sengathi ikwazile ukuzala ithelevishini ngalinye esinalo ekhaya. Futhi uma ekugcineni ngilitholile ilukuluku lakho, uzohlabeka umxhwele impela lapho ngikutshela ngezici zalo.
El C Imbewu 262 es ithelevishini enkulu kunazo zonke emhlabeni. Kuyinto edidiyela i-a Isikrini se-intshi se-262 (yingakho igama laso likhanga kancane) nokuthi linikezela nge Ukulungiswa kwe-4K ngobuningi bamaphikseli angama-4096 x 1716 Kuyamangalisa ukuthi lapho uCristiano Ronaldo ekhahlela ibhola eduze kakhulu uzocabanga ukuthi uzokhahlela ubuso bakho. Futhi ngokusobala, ifaka nezipikha ezi-6 kuye kwezi-10 (kuya ngohlobo) ongazilungiselela njenge-7.1 noma i-9.1 ezizungezile. Omakhelwane bakho bazokuzonda!
Ithelevishini ayinakho okuyinkimbinkimbi, ngisho nasemasangweni ehlobo, ngoba ayinandaba nakancane ngayo Ama-800 kilos wesisindo. Kepha qaphela, ngoba njengoba sengishilo, kungenzeka futhi ukuthi uzimisele ukuphonsa phansi udonga lwendlu ngoba iC Seed 262 inobukhulu be amamitha ayisithupha ububanzi, amamitha ayisishiyagalombili ukuphakama namamitha angu-6,65 ngokulandelanaWozani, endlini ejwayelekile yalabo banamuhla abanophahla lwamamitha angu-2,30, akukho lapho bangabeka khona iC C 262. Kodwa-ke, ake sibhekane nakho, inani lama-euro ayi-490.000Yimuphi umuntu "ojwayelekile" ongathenga le mecca yasekhaya yaseshashalazini?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Isithombe nomsindo » Ama-TV » Le yi-TV enkulu kunazo zonke futhi ebiza kakhulu emhlabeni
IBox isivele inesicelo sedeskithophu futhi ibizwa ngeBox Drive
ITesla Model X yiSUV ephephe kunazo zonke emhlabeni